Tourism – CEO Business & Management Magazine
ခရီးသွားရာသီအတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးစဉ်တွေသွားရင် အခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတာက ခရီးသွားအာမခံပါ။ တကယ်လို့ ခရီးသွားအာမခံကို စဉ်းစားခဲ့ရင်မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ ၁။ ခရီးသွားအာမခံအကြောင်းခရီးသွားချိန်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ မတော်တဆထိခိုက်မှု၊ ဖျားနာမှု၊ ပစ္စည်းပျောက်ဆုံးပျက်စီးမှု၊ ခရီးဆောင်အိတ်ပျက်စီးမှု၊ ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းမှုတွေကို ထိခိုက်နစ်နာမှုနည်းပါးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ခရီးသွားအာမခံမျိုးကကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲ။ ထိခိုက်နစ်နာမှုနည်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့ အာမခံတွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။– အစီအစဉ်– ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ အာမခံကုမ္ပဏီ– ဆုံးရှုံးမှုပမာဏ ၂။ ဘယ်လိုအရာတွေကို အာမခံထားလဲ။ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို သေချာသိထားသင့်ပါတယ်။– ခရီးထွက်မယ့်နေရာ– လေယာဉ် ဒါမှမဟုတ် ကားစီးမှာလား။– နှင်းလျောစီး၊ လေထီးခုန်အစရှိတဲ့ စွန့်စားမှုတွေပါလား။– ခရီးစဉ်ကြာချိန်– တစ်ကိုယ်တော်၊ စုံတွဲ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုလိုက် ခရီးထွက်မှာလား။– ယူဆောင်သွားမယ့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး ၃။ သေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သင့်တဲ့ အရာတွေ– ကိုယ်ဝယ်ယူမယ့်အာမခံက ပြည်ပမှာဖြစ်တဲ့ မတော်တဆတွေအတွက်ပဲလား၊ ပြည်တွင်းမှာ ပြန်အသုံးပြုလို့ရနိုင်လားဆိုတာလေ့လာပါ။– ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ပမာဏလား၊ ဒါမှမဟုတ် […]
ခရီးတွေသွားတဲ့အခါ အသစ်အဆန်းလေးတွေကို တွေ့ကြုံရပြီး ကိုယ်ကြိုတင်တွေးထင်ထားတဲ့ယူဆချက်တွေကို ဖယ်ပစ်လိုက်ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးလို့ပြောလိုက်ရင် လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက ကြိုတင်တွေးဆချက်တွေကိုပဲ စိတ်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လွဲမှားနေတဲ့အယူအဆတွေနဲ့ အမှန်က ယနေ့ခေတ်အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ်တွေက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ်တွေက လူကြီးတွေအတွက်ပဲ၊ ရှေးကျတဲ့ ဖက်ရှင်ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုမျိုးအတွေးတွေရှိတယ်ဆိုရင် ယနေ့ခေတ်အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ်က အဲဒါနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အပျော်စီးသင်္ဘောတွေပေါ်မှာ တေးဂီတနဲ့အကဖျော်ဖြေပွဲတွေ၊ ခမ်းနားတဲ့ညစာစားပွဲတွေ၊ ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းတွေနဲ့ ရေလွှာလျောစီးခြင်းအတွေ့အကြုံတွေကို ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ အခုဆိုရင် အပျော်စီးသင်္ဘောတွေက ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့နေရာအဖြစ်လည်း လျင်လျင်မြန်မြန်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် စက်ရုပ် Bartender တွေရဲ့ တည်ခင်းပေးမှုတွေကိုလည်း ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ၂။ အပျော်စီးသင်္ဘောခရီးစဉ်တွေက လည်ပတ်သူများပြားတဲ့၊ အထင်ကရနေရာတွေပဲဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့က နိုင်ငံတွေအချင်းချင်းဆက်ဆံမှုတွေများလာတာနဲ့အမျ တမူထူးခြားတဲ့ ခရီးသွားအတွေ့အကြုံအသစ်တွေရဖို့က ပိုမိုခက်ခဲလာပါတယ်။ အပျော်စီးသင်္ဘောတွေက ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေပြီး တစ်ခါမှမမြင်ဖူး၊ မရောက်ဖူးတဲ့ခရီးစဉ်တွေကို […]
၁။ အဝတ်တွေကို လိပ်ပြီးထည့်တာ။ အဝတ်အစားတွေကို လိပ်ပြီးမှ အိတ်ထဲထည့်တာမျိုးကအဝတ်တွေကို တွန့်ကြေစေတဲ့အတွက် အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီ သက်သက်စီထားပြီးမှ အတွင်းခံတွေကို အိတ်အသေးထဲထည့်ပါ။ ၂။ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲ ပစ္စည်းအများကြီးထည့်တာ။ အိတ်ထဲ ပစ္စည်းတွေများပြီး ရှုပ်နေတာမျိုးမဖြစ်အောင် မီးခိုး၊ အဖြူ၊ အမဲရောင်အဝတ်တွေပဲသယ်ပါ။ ရှူးဖိနပ်တွေ အစား ဖိနပ်အပါးလေးတွေသယ်ပါ။ ၃။ Compression မသုံးတာ။ သင့်အိတ်ထဲက အဝတ်အစား၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ မတွန့်ကြေအောင် Compression Pad သုံးပါ။ ၄။ ရှိသမျှပစ္စည်းတွေကို အိတ်ထဲမှာ စုပြုံပြီးထည့်တာ။ အိတ်ရဲ့ညာဖက်မှာ အဝတ်အစားတွေကိုထားပြီး ဖိနပ်နဲ့ တခြား လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို ဘယ်ဘက်မှာ ထုပ်ပိုးထား လိုက်ရင် သင့်အဝတ်တွေလည်း မပေကျံတော့ဘူးပေါ့။ ၅။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဝတ်မယ့်အဝတ်တွေကို လက်ကိုင်အိတ်ထဲထည့်တာ။ သက်သောင့်သက်တာရှိမယ့် အဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီး […]
၂၀၁၆ ခုႏႇစ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏႇစ္ေတြအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးက႑မႇာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းရဲ႕ ကူညီေထာက္ခံမႈေတြအမ်ားႀကီးရခဲ့သလုိ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမႇာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ဖိအားေတြကို ခံခဲ့ရတာလည္း အမႇန္ပါပဲ။ အစိုးရသစ္လက္ထက္မႇာ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြ၊ မူ၀ါဒေတြအေပၚ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရႇင္ေတြနဲ႔ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံသူေတြရဲ႕ ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြလည္း ရႇိေနခဲ့ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရႇင္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးပညာရႇင္ေတြကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏႇစ္အတြင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ တိုးတက္ႏႈန္း ရပ္တန္႔မႈေတြ ရႇိခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာဆိုၾကတာေတြရႇိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံရဲ႕ဘယ္လုိက႑ေတြမႇာ ဘယ္လုိမ်ဳိးအေျခအေနေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး တကယ့္အခ်က္အလက္ Figure ေတြ၊ ခန္႔မႇန္းခ်က္ေတြက ဘယ္လုိညႊန္ျပေနလဲဆုိတာကို ျပန္ၾကည့္ဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလုိအေတြ႕အႀကံဳအေနအထားေတြေပၚမူတည္ၿပီး ၂၀၁၈ နဲ႔ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း ေကာင္းမြန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာမႇာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေရေျမအေနအထားအေပၚ […]
Posted On February 4, 2018, By Editorial
Jodi Weedon Chief Executive Officer Australia – Myanmar Chamber of Commerce (AMCC) Australia – Myanmar Chamber of Commerce (AMCC) ရဲ႕ CEO Mrs.Jodi Weedon နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခိုက္မွာ AMCC ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္အစီအစဥ္ေတြအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လႈပ္ရွားမႈေတြအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ AMCC အေၾကာင္းရႇင္းျပေပးပါ . . . AMCC က ၾသစေၾတးလ်နဲ႔ ျမန္မာႏႇစ္ႏိုင္ငံအၾကား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ AMCC ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္တဲ့ ၊ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံခ်င္တဲ့ ၾသစေၾတးလ်လုပ္ငန္းရႇင္ေတြကို ကူညီေပးတယ္။ […]
Posted On May 19, 2017, By Editorial
စင္ကာပူႏုိင္ငံကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔၊ Business Partner ရႇာဖို႔အတြက္ သြားမယ္ဆိုရင္ သိထားသင့္တဲ့အခ်က္ေတြ၊ ေဆာင္ရန္၊ ေရႇာင္ရန္ေတြကို Kelly J Trading Ltd ရဲ႕ CEO ျဖစ္သူ စင္ကာပူႏုိင္ငံသား Mr Victor Yeo က အခုလိုေျပာျပထားပါတယ္။ စင္ကာပူလုပ္ငန္းရႇင္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ ဘယ္လို Appointment ျပဳလုပ္ရမလဲ . . . စင္ကာပူအစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ International Enterpries(IE) က ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ျဖစ္တဲ့ Bugis Area မႇာ ရႇိပါတယ္။ အဲဒီကုိ ျမန္မာလုပ္ငန္းရႇင္ေတြဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီး ကိုယ္စိတ္၀င္စားတဲ့လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကို စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္တယ္။ သူတို႔က သင့္ေတာ္မႇန္ကန္တဲ့ လုပ္ငန္းရႇင္၊ ဒါမႇမဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ စင္ကာပူမႇာ […]
Posted On April 4, 2017, By Editorial